Samsung wave2 GT-S8530 bada 2.0 firmware - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Firmware Firmware တင်နည်း Phone Application Samsung နည်းလမ်းများ Samsung wave2 GT-S8530 bada 2.0 firmware
Maung Pauk at 6:27:00 PM Firmware, Firmware တင်နည်း, Phone Application, Samsung, နည်းလမ်းများ,
samsung wave2 GT-S8530 ကို Bada 2.0 တင်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုကျော်စွာနဲ့အတူးအားလုံးအဆင်ပြေဖို့
ပြီးရင် ဒေါင်းထားတာကို Folder တစ်ခုထဲမှာ အကုန်ထည့်ထားလိုက်ပါ ပြီးရင် Zip တွေကိုပြန်ဖြေလိုက်ပါ
ပြီးရင် PC မှာ Driver တင်ထားပါ.. Driver လည်းသိပြီဆိုရင် ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပါ ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးရင်
Vol Down + Home + Power နဲ့ Download Mode ကို ၀င်လိုက်ပါ Vol Up ကိုထပ်နှိပ်ပေးပါ..
ပြီးရင် ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ MultiLoader_V5.65.ZIP ကိုပြန်ဖြေလို့ရတဲ့ MultiLoader_V5.65.exe ကို PC မှာ
Run ပါ...MultiLoader_V5.65 ရဲ့ Control Box ရဲ့အောက်မှာ LSI ကို ရွေးပေးပါ..Boot Change ရဲ့ရှေ့မှာ
အမှန်ခြစ်ထည့်ပေးပါ..ပြီးရင် FullDownload ရဲ့ရှေ့မှာ အမှန်ခြစ်ထည့်ပေးပါ....Boot ကိုနှိပ်ပြီးတော့
samsung wave2 GT-S8530 bada firmware.zip ကိုပြန်ဖြေလို့ရတဲ့ Folder ထဲက BOOTFILES ဆိုတာကို
Folder လိုက်ရွေးပေးလိုက်ပါ...ပြီးရင် Zip ကိုပြန်ဖြေလို့ရလာတဲ့ Folder ထဲက နေပြီးကျန်တာတွေကိုရွေးပါ..
တို့ကိုရွေးပေးပါ ရွေးပေးပြီးရင် ကျန်တဲ့ FOTA, TUNE, ETC, PFS unchanged တို့ကိုဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါ
ပြီးရင် MultiLoader ကနေပြီးတော့ဖုန်းကိုတွဲထားတဲ့ Post ကိုရှာပါလိမ့်မယ် သိပြီဆိုရင် Download ကိုနှိပ်ပါ..
Firmware ကို ပြန်တင်နေတာကိုကြည့်နေလိုက်ပါ...Complete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် ဖုန်းကို PC နဲ့တွဲထားတာကို
ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါ...ဖုန်းက Reset ကျသွားပါလိမ့်မယ်..ပြန်တက်လာရင်တော့ ဖုန်းက Bada 2.0 နဲ့လန်းနေပါပြီ
Your phone will restart again and maybe the language is changed too. Change the language back to English and your are done.Congratulations, you have now successfully installed Bada 2.o operating system on your Wave II mobile phone.
samsung wave2 GT-S8530 bada firmware(mediafire)
Samsung Wave2GT-S8530 bada firmware (Solidfiles)
Default Team ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာလေ့လာလိုက်ပါဗျာ
First of all, download the themes you like for your phone. Make sure the extension is “.smt”. A simple google search will land you 10′s of themes for Bada 2.0.
Firmware, Firmware တင်နည်း, Phone Application, Samsung, နည်းလမ်းများ
Firmware Firmware တင်နည်း Phone Application Samsung နည်းလမ်းများ